Posted on May 29, 2011 by giriyaad
Xadhiga Ibraahim Aamiin Gadiid Waa Aargoosi Ay Masuuliyiinta Xisbiga Kulmiye Lagaadhi Waayeen Ina Rayaale:
Waxa Madaxweyne Siilaanyo Amar ku Joojiyay Baadhitaankii Wasiirka Iyo agaasimaha, waxaanu Ogolaaday in Ibraahin Muumin Gadiid Xabsiga La Dhigo, Mana Jirto cid Reer Awdal ah oo ka hadashay.”
Hargeysa, (Harowo) – Ibraahin Muumin Gadiid oo ka tirsanaan jiray masuuliyiinta wasaarada waxbarashada ee xukuumadii Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin waxa uu xabsiga ku jira mudo bil ku dhawaad ah, waxaana xidhay oo amray xadhigiisa hanta dhawraha guud ee qaranka, hasa yeeshee waxa dad badani ka dayrinayaan xaaladiisa iyo sababta xadhigiisa loo cuskaday oo lagu tilmaamay inay tahay mid siyaasadaysan.
Ibraahin Muumin Gadiid waxa uu wasaarada waxbarashada ka soo qabtay shaqooyin kala duwan waxaanu ahaa agaasimaha maaliyada ee wasaarada, waxaana lagu sheegay xadhigiisa mid la xidhiidha hanta la lunsaday xiligii xukuumadii hore, hasa yeeshee waxa laga reebay xadhigooda iyo in baadhitaan lagu sameeyo wasiirkii wasaarada Xasan Gadhwayne, kaas oo hanta dhawrku sheegay in Madaxweyne Siilaanyo amray inaan la baadhin.
Hadaba waxa la is waydiinayaa in masuulkan xabsiga la dhigo iyadoo la diiday in baadhitaan lagu sameeyo Agaasimihii guud ee wasaaradaas iyo wasiirkeedi, waxa kale oo xusid mudan in wasiirka cusub ee wasaaradaa uu u magacaabay Axmed Siilaanyo ay sheegtay in wasaarada waxbarashadu tahay meel habaysan oo si wayn looga shaqeeyay.
Wasiirkii wasaarada iyo agaasimihii guud ee wasaarada ayaa iyaga laga daayay in la baadho waxaana iyadoo aan la cadayn in danbi lagu helay iyo lunsi si deg deg ah xabsiga loogu taxaabay Ibraahin Muumin Gadiid oo ka soo jeeda qabiil ahaan jufadii Madaxweynihii hore.
Ibraahin Muumin Gadiid ayaa ka mid ahaa masuuliyiintii sida gaarka ah ay xisbiga Kulmiye iyo taageerayaashiisu u bartilmaameedsan jireen xiligii ay xisbiga mucaaridka ahaayeen, waxa kale oo xusid mudan in lagu af-laagaadayn jiray qabiilka uu yahay, isla markaana ay muuqato in xiligan loo bartilmaameedsanayo.
Waxaan jirin ilaa iyo imika cid ka tirsan madax dhaqameedyada iyo wax garadka reer Awdal oo ka hadashay xadhiga sharci darada ah ee lagula kacay Ibraahin Muumin Gadiid oo in badani tilmaamayaan inuu yahay mid siyaasadaysan, oo loo eryanayo in Madaxweynihii hore ay isku reer ahaayeen oo loo aanaynayo inay isku dhawaayeen.
Waxaan ilaa imika jirin cid ka tirsan wasaarada wax barashada oo loo qabsaday wax musuq maasuq ah, waxaan kale oo aan iyaduna jirin wax wasaarad dawladeed ah oo masuuliyiinteedi la qabsaday, taas oo loo aanaynayo in Madaxweyne Siilaanyo ka cabsi qabo in cidii masuul reerkooda ka tirsan laga xidho ama laga eedeeyo ay ku keeni karto kacdoon iyo mucaaridad. Hasa yeeshee Ibraahin Muumin Gadiid loo sadqeeyo waxa loogu yeedho musuq maasuq sifaynta xukuumada Siilaanyo.